के छ मुकारुङ, सोलुखुम्बुतिर ? - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अचानक विसं २०६३ फागुन १० गतेको दिन मैले उहाँको चोला उठेको अप्रिय खबर सुन्नुपर्‍यो । हाम्रो अन्तिम भेटको निसानी त्यही कार्यक्रममा बलेको दीपछेउ चम्किरहेको उहाँको स्निग्ध अनुहार भयो । म भावविह्वल भएँ । मेरो आँसु रोकिएन । मुत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि म किन यति धेरै स्तब्ध भएँ ? किनभने जीवनको त्यस्तो मोडमा मैले उहाँको साथ पाएको थिएँ, जुन मोडमा उभिएर हेर्दा अघिल्तिर हिँड्नलाई सयौं बाटोहरू स्वागतमा हुन्छन् । तर कुन बाटो हिंड्दा जीवनले आफैँलाई धन्यवाद दिन्छ ? खुट्याउन सकिन्न । यहीबेला मलाई यो बाटो देखाउनुभयो, जुन बाटोले आज मलाई यतिसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । मोहन दाइ ! अहिले फेरि म, हाम्रो हरभेटमा दोहोरिने तपार्इंको त्यो प्रश्न– ‘के छ मुकारुङ सोलुखुम्बुतिर ? ठीक छ ?’ सुन्न चाहन्थेँ र सधैंझैँ त्यसरी नै म उही उत्तर दिन चाहन्थेँ । तर मलाई थाहा छ, मेरो उत्तर पनि तपाईंको त्यो प्रश्नसँगै यो ब्रह्माण्डमा गुन्जिरहने तर सजिलै सुन्न नसकिने आवाज भइसकेको छ । जसरी हरकोहीलाई तपार्इंका कविताहरूको आवाज सजिलै सुन्न कठिन छ । प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०९:४९